I-Semalt Expert iveza iZenzo zoLwazi lweeNzululwazi ukuze ukhulule i-SEO yakho
I-intanethi ishintshe ngokuthe ngcembe zonke ezinye iindlela zokuthengisa zendabuko abantu abazenzayo namhlanje. Ngokomzekelo, i-webmasters inokuqhuba izicwangciso zabo zokuthengisa ngokusebenzisa ezinye izixhobo zokuzicwangcisa ze-SEO ezifana ne-Google Analytics. Kwezinye iimeko, abanye abantu bakhetha ukuxhomekeka ku ukuthengiswa kokuqukethwe ukufikelela kubaxhasi babo. Ezi ndlela zizama ukwandisa ubukho bewebhusayithi yakho, uphawu okanye ezinye iinkalo zezinto zonke zeprogram zewebhu ezifana nophuhliso lwe-intanethi. Kukho nezinye iimeko apho abantu behluleka ukuqhuba iindlela zokuThengiswa kweMidiya yeNtlalo (SMM) ngokufanelekileyo xa beka ii-website zabo zezorhwebo.
Ezinye zeendlela ze-SEO apho i-webmasters zakha iindawo ze-e-commerce eziyimpumelelo ziyafumaneka kule khokhelo enikezelwa nguNic Chaykovskiy, umphathi weMatriki oPhumeleleyo we-12 (Semalt : 10)
Khuphula inani labalandeli bakho
Ugunyaziso lweakhawunti yeendaba ezentlalo lukhula kunye nenani labalandeli. Abantu bavame ukuba nethemba kwi-akhawunti ye-akhawunti enabalandeli abaninzi kunomnye ombalwa. Kufuneka usebenzise amaqhinga okuthengisa ezinobungozi ukudweba abaninzi kubalandeli kwiakhawunti yakho. Kwakhona kubalulekile ukuhlala ngokuzinikela ngokuthe ngqo kubathengi abahlukeneyo abavela kwimimandla ebalulekileyo yokwenza umsebenzi wokuthengisa ngokubanzi kwi-intanethi uphumelele. Ungakwazi kwakhona ukwenza i-website iphumelele abalandeli abatsha kwiluhlu lwabalandeli bokwenene ngokukhuthaza ukukwabelana. Kukho izixhobo ezininzi zokwenza umsebenzi we-SEO ezinokukunceda nabani na ukwandisa inani labalandeli babo kunoma yimuphi umsebenzi..
Iziqhagamshelwano zangaphandle kunye nezibangeleyo zilungile
Iipalati zeendaba zoluntu zenza umthombo onamandla we-backlink ezinamandla. Kukho imeko ezininzi apho abasebenzisi beza kunye nezixhumanisi ezininzi ezingenayo ukwenzela ukuba i-website ikhule ibe yindawo. I-Backlink ezivela kwi-website yezobuntu zentlalo zibala njenge-backlink quality. Abaxhamli bazuzwa ngendlela le i-backlink ivelisa iindwendwe ezininzi kwiindawo zabo. I-backlink zangaphandle zihamba nazo i-juice ye-link, efanelekileyo ukusetyenziswa ngendlela abantu abazuza ngayo kwi-backlinks. Kukho nezinye iindlela apho iziqhagamshelo ezinokuthi zithwale i-juice link zikhupha igunya le-domain yakho.
Unokuchaphazela isigqibo sabalandeli bakho abakhona ukuba babelane ngomxholo. Umele uthumele umxholo onelungelo lomsebenzi wokwabelana. Isiqulatho sivela ngendlela abantu abaqhuba ngayo izinto ezibalulekileyo zokuthengisa. Abantu nabo bavela ngeengcamango zobugcisa malunga niche yakho ethile. Kwakhona kunokwenzeka ukuba abantu babelane ngesithuba semidiya yoluntu ngokuyenza ibe yintsebenziswano. Enye indlela yokudala yokubandakanya abaphulaphuli kukuqhuba iimincintiswano. Imincintiswano, apho umphumeli ethwala i-freebie, unokunyusa ixesha lokudibanisa kwiwebhusayithi yakho.
Ii-webmasters ezahlukeneyo zineendlela ezahlukahlukeneyo ezinceda abantu ukuba bathengise i-intanethi kwiintlobo zabo ezahlukeneyo. Iinkampani ezinkulu eziyimpumelelo zinamaziko amaninzi eCommerce enza iinkalo ezahlukeneyo kuwo wonke umhlaba. Kwezinye iimeko, i-SMM kunye nezinye izakhono zokuthengisa ze-intanethi zenza iiwebhsayithi zidwebe iindwendwe eziza kuba ngabaxhasi. Ezinye zeendlela onokwenza ngayo umkhankaso we-SMM ophumeleleyo njenge-Twitter apha kwesi sikhokelo. Uyakwazi ukusetha uphinde wenze i-website ye-intengiso ye-intanethi enye impumelelo kunye nezinye iinzame ze-intanethi eziphumelelayo.